Sweden iyo Hargabka doofaarka | Somaliska
Cudurka loo yaqaan hargabka doofaarka (H1N1) ayaa u muuqda in uu ku soo laabtay Sweden ayadoo la soo sheegayo in dad badan ay u soo dheceen isbuucyadii ugu dambeeyay. Wiil 7 sano jir ah ayaa ku dhintay maagalada Helsingborg isbuucaan. 65 qof ayaa u soo dhacay cudurka isbuucyadii la soo dhaafay ayadoo ay dhaqaatiirta sheegayaan in dadka aan qaadan talaalkii sanadkii la soo dhaafey ay u badan yihiin. Dhamaan shacabka ku nool Sweden ayaa 60% waxay qaateen talaalka. Hargabka doofaarka ayaa sanadkii 2009 jahwareer galiyay caalamka asagoo 30 qof ku dilay Sweden halka uu kumanaan kale ku dilay caalamka. Cudurkaan ayaa markiisii hore ka soo faafey dalka Mexico ayadoo la sheego in uu ka yimid xayawaanka doofarka.
Sweden iyo Hargabka doofaarka
Cudurka loo yaqaan hargabka doofaarka (H1N1) ayaa u muuqda in uu ku soo laabtay Sweden ayadoo la soo sheegayo in dad badan ay u soo dheceen isbuucyadii ugu dambeeyay. Wiil 7 sano jir ah ayaa ku dhintay maagalada Helsingborg isbuucaan.
65 qof ayaa u soo dhacay cudurka isbuucyadii la soo dhaafay ayadoo ay dhaqaatiirta sheegayaan in dadka aan qaadan talaalkii sanadkii la soo dhaafey ay u badan yihiin. Dhamaan shacabka ku nool Sweden ayaa 60% waxay qaateen talaalka.
Hargabka doofaarka ayaa sanadkii 2009 jahwareer galiyay caalamka asagoo 30 qof ku dilay Sweden halka uu kumanaan kale ku dilay caalamka. Cudurkaan ayaa markiisii hore ka soo faafey dalka Mexico ayadoo la sheego in uu ka yimid xayawaanka doofarka.
Tirada dadka qaatay dhalashada Sweden
Waa sanad guuradii 5-aad ee Somaliska
Safarkaygii Islaamka: Bruce waxa uu ahaa Kiristaan aan qanacsanayn